ရနျကုနျတိုငျးအတှငျး လြှပျစဈဆိုငျရာ လိုအပျခကျြအတှကျ Hot line နံပါတျ 1717 အား အခြိနျမရှေး ဆကျသှယျဖွရှေငျး/ပွနျကွားပေးနိုငျရနျ ဆောငျရှကျမညျ | Opinion Leaders
ရနျကုနျတိုငျးအတှငျး လြှပျစဈဆိုငျရာ လိုအပျခကျြအတှကျ Hot line နံပါတျ 1717 အား အခြိနျမရှေး ဆကျသှယျဖွရှေငျး/ပွနျကွားပေးနိုငျရနျ ဆောငျရှကျမညျ
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး လြှပျစဈမီးသုံးစှဲသူ မိဘမြား၏ လြှပျစဈဆိုငျရာ လိုအပျခကျြမြားအား အခြိနျနှငျ့တပွေးညီ ဖွရှေငျး/ပွနျကွားပေးနိုငျရေးအတှကျ လညျးကောငျး လြှပျစဈဆိုငျရာ ကွိုတငျသတိပေးခကျြမြားနှငျ့ အသိပညာပေး ကွျောငွာခွငျးမြား ဆောငျရှကျနိုငျရနျအတှကျ လညျးကောငျး YESC Call Center အား ဖှငျ့လှဈ၍ ပွညျသူ့ဝနျဆောငျမှုမြားကို စတငျဆောငျရှကျပေးလြှကျရှိရာ Hot line Phone No . 1717 အား လူအမြား စညျကားရာနရောမြားတှငျ Bill Board မြားဖွငျ့ ကွျောငွာခွငျးမြား ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈဟု လြှပျစဈနှငျ့ စှမျးအငျ ဝနျကွီးဌာန ဒုတိယအမွဲတမျးအတှငျးဝနျ ဦးစိုးမွငျ့ က ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
“YESC Call Center စတငျဖှဲ့စညျးသညျ့ ၁.၇.၂၀၁၅ ရကျနမှေ့ စတငျဖှငျ့လှဈ၍ ပွညျသူ့ဝနျဆောငျမှုမြားအား ဆောငျရှကျပေးလြှကျရှိရာ ယငျး Call Center တှငျ Auto Telephone (၅) လုံး ( 01-2302265 ၊ 01-2302286 ၊ 01-2302287 ၊ 012302288 ၊ 01- 2302289) တပျဆငျထားပွီး MPT နှငျ့ ညှိနှိုငျး၍ Hunting System ထညျ့သှငျးကာ ဝနျဆောငျမှုပေးခွငျး ၊ YESC Call Center Facebook Account ဖှငျ့လှဈပွီး အမြားပွညျသူသို့ ဝနျဆောငျမှုပေးခွငျးမြား စဉျဆကျမပွတျ ဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး၊ ယငျးသို့ဆောငျရှကျနိုငျရေးအတှကျ တာဝနျခံအဖွဈ မနျနဂြောအငျဂငျြနီယာတဈဦး ထားရှိပွီး တာဝနျကြ အဖှဲ့တဈဖှဲ့လြှငျ အငယျတနျးအငျဂငျြနီယာ တဈဦး၊ အငယျတနျးစာရေး ၅ ဦး၊ တို့ ပါဝငျသော အဖှဲ့ ၄ ဖှဲ့ ဖှဲ့စညျးကာ Duty အခြိနျမြားအား နံနကျ ၀၆း၀၀ မှ ၁၈း၀၀ နာရီအခြိနျထိ လညျးကောငျး၊ ၁၈း၀၀ နာရီမှ နောကျတဈနေ့ နံနကျ ၆း၀၀ နာရီအခြိနျထိ လညျးကောငျး အလှညျ့ကြ ၂၄ နာရီ တာဝနျထမျးဆောငျလြှကျရှိကွောငျး၊ YESC Call Center တှငျ တပျဆငျထားသော Auto Telephone (၅) လုံးအား လြှပျစဈမီးသုံးစှဲသူမှ ချေါဆိုရာတှငျ ပိုမိုလှယျကူ လြှငျမွနျစရေေးနှငျ့ မှတျသားရလှယျကူစရေေးအတှကျ Short Number ဖွဈသညျ့ 1717 အား နိုဝငျဘာ ၁ ရကျနမှေ့စ၍ ဆကျသှယျရေးညှနျကွားမှုဦးစီးဌာနနှငျ့ Network Operator မြား၏ အကူအညီရယူ၍ ပွောငျးလဲဆောငျရှကျနိုငျခဲ့ကွောငျး ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ကျောပိုရေးရှငျး YESC Call Center အနဖွေငျ့ ပွညျသူ့ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနအေား သိရှိနိုငျပါရနျနှငျ့ မိဘပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ YESC Call Center အား ပိုမိုသိရှိပွီး လြှပျစဈဆိုငျရာ လိုအပျခကျြမြားအား Hot line Phone No . 1717 သို့ ဆကျသှယျစရေေးအတှကျ လူစညျကားရာဖွဈသော သင်ျဘောဆိပျ ကားဂိတျ ရထားဘူတာ ဈေး ကြောငျး လမျးဆုံလမျးခှ စသညျ့ နရောမြားတှငျ Bill Board မြားဖွငျ့ ကွျောငွာခွငျးအား အမြားပွညျသူသိရှိအောငျ ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားမယျလို့” ဒုတိယအမွဲတမျးအတှငျးဝနျ ဦးစိုးမွငျ့ က ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ယနနေံ့နကျပိုငျး နပွေညျတျော လပျြစဈနှငျ့ စှမျးအငျ ဝနျကွီးဌာနတှငျ ပွုလုပျသညျ့ သတငျးထုတျပွနျရေးနှငျ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ ပွောကွားခဲ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။
နပွေညျတျော၊ ဒီဇငျဘာ - ၁၃
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲသူ မိဘများ၏ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖြေရှင်း/ပြန်ကြားပေးနိုင်ရေးအတွက် လည်းကောင်း လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးချက်များနှင့် အသိပညာပေး ကြော်ငြာခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လည်းကောင်း YESC Call Center အား ဖွင့်လှစ်၍ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများကို စတင်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိရာ Hot line Phone No . 1717 အား လူအများ စည်ကားရာနေရာများတွင် Bill Board များဖြင့် ကြော်ငြာခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ဟု လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးမြင့် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“YESC Call Center စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် ၁.၇.၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်ဖွင့်လှစ်၍ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများအား ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိရာ ယင်း Call Center တွင် Auto Telephone (၅) လုံး ( 01-2302265 ၊ 01-2302286 ၊ 01-2302287 ၊ 012302288 ၊ 01- 2302289) တပ်ဆင်ထားပြီး MPT နှင့် ညှိနှိုင်း၍ Hunting System ထည့်သွင်းကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ၊ YESC Call Center Facebook Account ဖွင့်လှစ်ပြီး အများပြည်သူသို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် တာဝန်ခံအဖြစ် မန်နေဂျာအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး ထားရှိပြီး တာဝန်ကျ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လျှင် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦး၊ အငယ်တန်းစာရေး ၅ ဦး၊ တို့ ပါဝင်သော အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကာ Duty အချိန်များအား နံနက် ၀၆း၀၀ မှ ၁၈း၀၀ နာရီအချိန်ထိ လည်းကောင်း၊ ၁၈း၀၀ နာရီမှ နောက်တစ်နေ့ နံနက် ၆း၀၀ နာရီအချိန်ထိ လည်းကောင်း အလှည့်ကျ ၂၄ နာရီ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိကြောင်း၊ YESC Call Center တွင် တပ်ဆင်ထားသော Auto Telephone (၅) လုံးအား လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲသူမှ ခေါ်ဆိုရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူ လျှင်မြန်စေရေးနှင့် မှတ်သားရလွယ်ကူစေရေးအတွက် Short Number ဖြစ်သည့် 1717 အား နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ဆက်သွယ်ရေးညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် Network Operator များ၏ အကူအညီရယူ၍ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကော်ပိုရေးရှင်း YESC Call Center အနေဖြင့် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေအား သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် YESC Call Center အား ပိုမိုသိရှိပြီး လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအား Hot line Phone No . 1717 သို့ ဆက်သွယ်စေရေးအတွက် လူစည်ကားရာဖြစ်သော သင်္ဘောဆိပ် ကားဂိတ် ရထားဘူတာ ဈေး ကျောင်း လမ်းဆုံလမ်းခွ စသည့် နေရာများတွင် Bill Board များဖြင့် ကြော်ငြာခြင်းအား အများပြည်သူသိရှိအောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့” ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးမြင့် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့နံနက်ပိုင်း နေပြည်တော် လျပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာနတွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ - ၁၃